सलमानले ऐश्वर्याको ढोकामा पूरा रात रुदैँ बिताए, आँसु मात्र हैन प्रेममा रगत समेत बगाए ! — Imandarmedia.com
सलमानले ऐश्वर्याको ढोकामा पूरा रात रुदैँ बिताए, आँसु मात्र हैन प्रेममा रगत समेत बगाए !
सलमान र ऐश्वर्याको प्रेम कहनी सन् १९९७ मा शुरु भएको थियो जब ऐश्वर्याले बलिउडमा भर्खरै पाइला टेकेकी थिइन् । त्यहि नै बेला सलमान सोमीसँग गहिरो प्रेममा थिए र उनीसँग बिहे गर्ने सोचमा थिए तर ऐश्वर्याको आगमनले सलमानको मन बदलिदियो ।
सुत्रको अनुसार एक दिन आधा रातमा सलमान खान ऐश्वर्याको घरमा पुगेका थिए । र ढोकामा ठूलो ठूलो आवाजले धक्का दिए तर ढोका नखुलेपछि सलमानले छतबाट हामफाल्ने धम्की समेत दिएका थिए । उनी करिब विहानको ३ बजेसम्म ढोका ढक्ढक्याइरहेका थिए ।
मानिसहरु भन्छन् ढोकामा हान्दा हान्दा उनको हातमा रगत समेत आएको थियो । सलमान ऐश्वर्यासँग तुरुन्तै बिहे गर्न चाहान्थे तर उनी भने सफलताको सिँढी चढ्दै थिइन् ।
२०७४ माघ १३ गते प्रकाशित